Dhijitari Kushambadzira Maitiro | Martech Zone
Dhijitari Kushambadzira Maitiro
Chitatu, Kukadzi 6, 2019 Chitatu, Kukadzi 6, 2019 Douglas Karr
Ichi chidimbu chikuru cheakawanda ezve maitiro atanga tichifungidzira kure nevatengi vedu - organic kutsvaga, kutsvaga kwemuno, kutsvaga kwenharembozha, vhidhiyo kushambadzira, kushambadzira email, kubhadharwa kushambadzira, kutungamira chizvarwa uye content marketing ndiwo maitiro akakosha.
Icho chakanyanya kunaka chokwadi icho iwe chaunoda kukosheswa kune ichangoburwa yedhijitari yekushambadzira manhamba uye ayo anopisa maitiro eako edhijitari yekushambadzira zano kuti urambe uchishanda mu2019 uye kupfuura. Wepamusoro 7 Maitiro Aunofanirwa Kuziva Yekubudirira Dhijitari Kushambadzira Campaign ine boka rezviverengero zvekushambadzira izvo zvinogona kuita seanoshanda matipi anoshanda ekurudzira ako ekushambadzira mishandirapamwe, kusanganisira kusarudza urefu hwakafanira hweako mablog mablog uye maemail kana kuita yako SEO matekiniki abudirire.
Izvi zvisinganzwisisike infographic ruzivo rwakanyanya kwazvo zvese izvo sangano rega rega rinofanirwa kunge richifunga nezvazvo pavanenge vachigadzira yavo yedhijitari yekushambadzira zano uye kuita mishandirapamwe inopesana naro. Kusanganisira:
Tsvaga Engine Optimization (SEO) - Ichi ndicho chinhu chakakosha kwazvo kune chero bhizinesi nekuti kutsvaga kwakaenzana chinangwa. Kana ndiri kutsvaga chigadzirwa kana sevhisi pamhepo, mikana ndeyekuti ini ndakagadzirira kutenga. Kumeso, 57% yevatengesi veB2B vakati keyword masosi anounza akawanda anotungamira kupfuura chero imwe nzira yekutengesa.
Yemunharaunda Kutsvaga Injini Kugonesa (Yemunharaunda SEO) - Kana iwe uri bhizinesi remuno, kuve unoonekwa pamepu yeGoogle mapikisi kwakakosha - 72% yevatengi vakaita kutsvaga kwemunharaunda vakashanyira chitoro mukati mamaira mashanu. Google Bhizinesi Rangu rava kuzivikanwa seyako yechipiri webhusaiti.
Kutsvaga Kwenhare - hafu yenyika iri kutarisa foni yavo vasati vasimuka pamubhedha uye 48% yevatengi vese vanotanga kutsvagurudza nhare nekutsvaga pane yavo kifaa. Nharembozha yekutsvaga kushambadzira kwemari inoramba ichikwira - inofungidzirwa pamusoro pemadhora makumi maviri emadhora.
Social Media Marketing - kuzivisa nekusimudzira basa zvinoshamisa mushe uye kunyangwe mumashambadziro akabhadharwa paFacebook, Twitter, Instagram, Pinterest uye LinkedIn. Kwete izvozvo chete, mhando dzine mukana wekuvaka nharaunda dzadzo uye dzinonyatsoita pachinhanho chavo pachavo nemadzinza avo.
Video Marketing - Ini handina kana mumwe mutengi wandisiri kuita imwe nzira yevhidhiyo zano. Ndiri kuvaka vhidhiyo studio yemumwe mutengi yeiyo chaiyo-nguva yemagariro vhidhiyo, ini ndine yekumashure animated loop vhidhiyo yeimwe mutengi saiti iri kushandirwa pa, ini ndichangobva kuburitsa yeanodeder anotsanangura vhidhiyo kune mumwe mutengi, uye isu tiri kugadzira chigadzirwa nyaya vhidhiyo yemumwe mutengi. Vhidhiyo inodhura uye bandwidth haisisiri nyaya kana wasvika kune vateereri vako. 43% yevanhu vanoda kuona zvakawanda zvemavhidhiyo zvemukati kubva kune vatengesi!
Email Marketing - maemail anotonhora anoramba achiendesa kutyaira uye mikana yezvikwata zvekutengesa. Kupatsanura uye kuita kwehunhu zvinoramba zvichiwedzera kuvhurika uye tinya-kuburikidza nemitengo. 80% yevashandisi veemail vanowana maemail account pane yavo nhare mbozha, saka nhare inoteerera dhizaini inofanirwa.
Kubhadhara Kushambadzira - sekuwanda kwenhamba uye nzira, uye kudzidza kwemuchina nehungwaru hwekunyepedzera kunatsiridza kuiswa uye kudzikisa mutengo, kushambadzira kwakabhadharwa kuri kuita zvakanyanya kushanda kupfuura zvakapfuura. Kutsvaga kwakabhadharwa, yakabhadharwa nzanga, zvemukati zvinotsigirwa, vhidhiyo kushambadza, uye toni yezvimwe sarudzo zviri kunze uko kumakambani kuti ashandise.
Lead Generation - kuvaka kudiwa pamwe nekushandurwa-kwakakwidziridzwa mapeji ekumhara uye kutyaira zvinotungamira uko kuburikidza zvakanyatsorongedzwa, zvakashongedzwa, uye zvakanangwa vatengi nzendo iri kuita imwe yeanoshanda kwazvo madhijitari ekushambadzira materu emakore gumi.
Content Marketing - vatengi uye mabhizinesi zvakafanana vari kuenderera mberi nekuzvitungamira uye nekutsvaga kwavo kunotevera kutenga online. Neruzha rwakawanda kunze uko, makambani ari kumanikidzwa kuisa nguva yakawanda nesimba mukuvaka zvemukati izvo chaizvo zvinotyaira mhedzisiro, asi kana zvadaro, inzira inoshanda uye inodhura yekukwezva vatengi.
Heano akazara infographic, kusimbiswa kukuru kwekukura uye marongero ayo bhizinesi rako rinofanirwa kunge richiendesa:
Tags: kunyoraContent Marketinggoogle kunyoramobile advertisingmobile marketingSocial Media Marketing
Makumi mana E-Commerce Maitiro Aunofanirwa Kutora
Maitiro Ekugadzira Yakabudirira Yenharaunda Facebook Kushambadzira Siti
May 22, 2013 pa 3: 34 AM
Yakanaka kutarisa infographic! Tinotenda nekugovera izvi nesu.
May 22, 2013 pa 6: 43 AM
Basa rakanaka, Doug. Hazvisi nyore kuwana ese emazuva ano maitiro uye inotsigira data mune yakapfupika yekuona. Ndatenda!
May 23, 2013 pa 8: 33 AM
Iyi yakanaka chaizvo infographic. Asi izvi handizvo here zvinhu chaizvo zvakafanotaurwa zve2012? Ndinoreva kushambadzira kwenhare, kushambadzira zvemukati, magariro enhau - kunze kwechinzvimbo chemunyori.
May 23, 2013 pa 9: 21 AM
Yakatumirwa kubva kuMailbox ye iPhone